जीवनाथ धमला - | Nagarik News - Nepal Republic Media
जीवनाथ धमला ३ आश्विन २०७७ शनिबार ११ मिनेट पाठ
गीतकारका रूपमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
‘म गीत पनि लेख्छु, कविता पनि लेख्छु। यी दुवै नै कविता हुन्, एउटा पाठ्य कविता हो भने अर्को गेय कविता हो। एउटा सामान्य लयमा गाइने गीत हो भने अर्को विशेष लयमा गाइने गीत हो।’
जीवनाथ धमला ६ भाद्र २०७७ शनिबार ५ मिनेट पाठ
इतिहासका केही सम्मानित समाजसेवी हुन्– माधवराज जोशी, दयावीरसिंह कंसाकार, आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द अधिकारी, कृष्णप्रसाद कोइराला र योगमाया।
जीवनाथ धमला २१ असार २०७६ शनिबार २५ मिनेट पाठ
राइन किनाराका किल्लाहरू
इतिहास छ, र त वर्तमान छ। हिजो छ, र त आज छ। आज छ, अनि मात्र भोलि हुनेछ। समयका पलहरू बित्दै जान्छन् र ती हिजो, अस्तिमा रूपान्तरित हुँदै विगत वा अतिततिर धकेलिँदै जान्छन्, अनि इतिहास बन्छन्। इतिहासले समयका खासखास क्षणहरूलाई छानीछानी संरक्षण गर्दोरहेछ। ती खास क्षणहरूलाई इतिहास बनाउने चाहिँ मानिसले नै रहेछ र उस्का कर्महरूले नै रहेछ। मानिसका कर्महरूलाई नै समयले इतिहास बनाउँदो रहेछ। त्यसैले समय, कर्म र इतिहास अन्योन्याश्रित रहँदा रहेछन्।
जीवनाथ धमला ४ जेष्ठ २०७६ शनिबार १७ मिनेट पाठ
सहिद र बिपी विचार
‘सहिद’ शब्दले देशको स्वाधीनता, अखण्डता एवं लोकतन्त्रका लागि आत्म–बलिदान दिने वीरत्व गुणयुक्त मानिसलाई बुझाउँछ। ‘सहिद’ त्याग, आत्मोत्सर्ग, निष्ठा, आदर्श, चेतना, वीरता, साहस, समपर्णजस्ता गुण र ती अनुसारका कर्मको पर्यायवाची शब्द हो। यी गुण र कर्महरूलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई आफ्नो राष्ट्रका खातिर होम्न रत्तिभर संकोच वा डर नमानी प्राणार्पण गर्ने वीर वा वीराङ्गानालाई नै वास्तविक अर्थमा ‘सहिद’का नामबाट सम्मान गर्न सकिन्छ। उसले राष्ट्रलाई शिरमा राखेको हुन्छ।
जीवनाथ धमला १७ माघ २०७५ बिहीबार २३ मिनेट पाठ
मैले अहिलेसम्म चार पटक यात्रा गरेँ त्यस घरको। पहिलो र दोस्रो पटक मैले गरेको त्यस घरको अवलोकन–यात्राकाल र गत महिना केही दिनमै दुई पटक पुगेका समयका बीच २८ वर्षको अन्तराल भइसकेछ। त्यसो त यसबीचमा एक–दुई पटक डा. पदमप्रसाद देवकोटालाई भेट्न जाँदा त्यस घरलाई नजिकै कम्पाउण्ड बाहिरबाट नदेखेको होइन।
जीवनाथ धमला ८ मंसिर २०७५ शनिबार २७ मिनेट पाठ
लोकतन्त्रीकरण मूलतः वैयक्तिक, सामाजिक एवं बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरूसँग पारस्परिक रूपमा सहज तादात्म्य राख्न राज्यद्वारा अनुप्रेरित, जनताद्वारा अनुमोदित एवं अवलम्बित व्यावहारिक कार्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।
जीवनाथ धमला २ मंसिर २०७५ आइतबार २१ मिनेट पाठ
सिंहदरबारको कैलाशमा बिताएका दिनहरू
२०३५ असारको पहिलो साताको कुनै दिन । एक जना गाउँकै साथी र म केही दिनपहिले मात्र गाउँबाट सहर आएका थियौँ । हामी पाटन मंगलबजारमा बसेका थियौँ । त्यो दिन पहिलोपटक हामी काठमाडौं घुम्न निस्केका थियौं।
जीवनाथ धमला १३ आश्विन २०७५ शनिबार १९ मिनेट पाठ
बिपी ४० वर्षमै हुनुभयो, तर आज?
वैचारिक दृष्टिकोणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्तमानसम्मकै केन्द्रीय व्यक्तित्व बिपी कोइरालाले नेपाली युवाहरूलाई प्रेरणादायी, अनुशीलनीय र जीवनोपयोगी सुझाव एवं सल्लाह दिनुभएको थियो ।
जीवनाथ धमला १ आश्विन २०७५ सोमबार १८ मिनेट पाठ
बिपीका राजनीतिक चिन्तनहरू मूलतः राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता अनि समाजवादका वैचारिक धरातलमा केन्द्रित रहे । बिपीले राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकअर्काका पूरक तत्वका रूपमा र स्वतन्त्रता केन्द्रित समाजवाद साध्यका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको पाइन्छ।
जीवनाथ धमला ७ श्रावण २०७५ सोमबार १९ मिनेट पाठ
सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, मानिस र घोडाबीचको सम्बन्ध मानव–सभ्यताको आरम्भदेखि नै रहँदै आएको हो । सिकारी युगमा मानिसले हातहतियार बनाउन जानिसकेका थिए । भाला, धनुकाँडजस्ता हतियार त्यसबेला आत्मसुरक्षा र सिकारका लागि मनुष्यले बनाउन सिक्यो । त्यस युगको अन्त्यसम्म मानिस धेरै चिन्तनशील भइसकेको थियो र सम्भवतः सिकारी युगको अन्त्यसम्म घोडा चढ्न थालिसकेको थियो ।
जीवनाथ धमला २६ जेष्ठ २०७५ शनिबार १९ मिनेट पाठ
श्रीखण्डको अवशेष सिंहदरबार
नेपाली जनताको श्रम र पसिनाबाट निर्मित सिंहदरबार देशको सर्वोच्च प्रशासकीय केन्द्र हो। यो एक सय १४ वर्षदेखि यो प्रशासकीय केन्द्रकारूपमा स्थापित छ।नीति र विधि निर्माणमा पनि सिंहदरवारको नै सर्वोच्चता कायम छ । यसर्थ यसले व्यस्थापकीय सर्वोच्चताको हैसियत पनि पाएको छ । २००७ सालपहिले त न्यायिक सर्वोच्चता पनि यसै दरबारमा निहित थियो।
जीवनाथ धमला ८ वैशाख २०७५ शनिबार २० मिनेट पाठ
जीवनाथ धमला १३ भाद्र २०७४ मंगलबार १४ मिनेट पाठ
जीवनाथ धमला २४ असार २०७४ शनिबार १७ मिनेट पाठ
आमशिशुझैँ मैले पनि जन्मेकै दिन प्रकृतिप्रदत्त उज्यालोसँग साक्षात्कार गरेको हुनुपर्छ । तर, चेतनाले आकार ग्रहण गरी नसकुन्जेल मलाई त्यसको अर्थ थिएन । नवजातशिशुले आमासँगको अविच्छिन्न साक्षात्कारका साथै अटुट मातृत्वको पोषण प्राप्त गर्ने क्रमसँगै आफूमा चैतन्यको वीजारोपण पनि गर्दै जान्छ र चाँडै नै उसको स्मृतिमा आमाको अनुहार सुरक्षित हुन्छ । शिशुलाई आमाको मुहारसँग अभ्यस्त बनाउँदै स्मृतिमा सुरक्षित बनाउने साधन भनेकै प्राकृतिक उज्यालो हो । स्मृति भनेकै चैतन्यदायी अनुभूतिको एउटा भित्री तह हो, जुन मानव मस्तिष्कमा सञ्चित भइरहन्छ । स्मृति निर्माणको आधार चैतन्य तत्वसँग मिश्रित उज्यालो हो । उज्यालोसँगको अविच्छिन्न सामिप्यताले मानिसमा सहज र स्वाभाविक ढंगमा चेतनाको विस्तार हुँदै जान्छ । प्राकृतिक उज्यालो नहुँदो हो त जीवजगत्को सम्भावना रहने नै थिएन । स्मृति–चैतन्यकै आधारमा मानिसले जीवन र जगत्को प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त गर्दछ, अनि मात्र अन्तज्र्ञान प्राप्तिको मार्गमा हिँड्न प्रेरित हुन्छ । अन्तज्र्ञान प्राप्तितर्फको यात्रा भनेको आध्यात्मिकतातर्फको आरोहण पनि हो । सामान्य जनका लागि त्यो केही हदसम्म कठिनझैँ लाग्न सक्छ । आममानिस कठीनतातर्फ अग्रसर हुन चाहँदैनन् । म पनि आममानिसमध्येकै एक हुँ ।
जीवनाथ धमला ६ जेष्ठ २०७४ शनिबार १४ मिनेट पाठ
जीवनाथ धमलाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्